Best Songs List maalin awowayaashaa, 2012
> Resource > Top List > Aabbaha Best waxaad dhahdaa Songs List 2012
Maalinta Aabbaha Happy ee dhammaan aabayaasha iyo kuwa sidii awowayaashood in. Si sharaf ninkaas gaar ah ee noloshaada, halkan waa aabbihiis ugu fiican ee songs maalin ku saabsan Aabbayaashow iyo sharaf ee aabayaasha. Waxaan jeclahay oo dhan cayn kasta oo muusiko, sidaas darteed waxaan isu keenay liis yar ee ugu fiican heesaha maanta waxaa awowayaashiis .
Aabbaha Best Maalinta Songs List 2012
Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah Songs talinayo Top Waayo, awowayaasheen Day. Waxay ku saabsan aabayaasha heeso carruurtooda, ama ay awowayaashood waa Aabayaalkood noqdo, ama wiilal iyo gabdho maqan aabayaasha ay, ama wax u eg bini rajeeyeen in uu ku Yidhi Aabihiis ka hor waxa uu ahaa mid aad looga daahay. Waxaan rajeynayaa songs, kuwaas oo caawin kara marka aad xulan heeso aad hawlaha maalin Aabayaalkood .
Maalinta Songs Aabbaha Top ee:
1.Father iyo Wiilka - Cat Stevens
Heesta, oo music jilicsan yahay la dynamicism ah saaqmay, waxa uu ka hadlayaa sarifka lacagaha ah oo u dhexeeya aabbe aan fahmi jecel yahay wiil ay ku caasiyooba ka dibna qaabaynta nolol cusub, oo ina ah oo aan run ahaantii karayn waxcaddayn laakiin waa ogyahay waa markii isaga u si uu u doondoono aayahooda. Si taas loo celinayaan, Stevens gabyaa ee qoto dheer diiwaan khadadka aabaha, halka mid ka mid ah sare oo ka badan caadifadeed kuwa wiilka.
2.Father iyo Gabadhay - Paul Simon
3.Dance aabbahay ula jiray - Luther Vandross
4.Can aad dareento Love Tonight- qoray Elton John
5.Papa ma i maqli kartaa - Barbra Streisand
6.Just ayaa labo ka mid ah Us - Will Smith
7.Seein "Aabbahay In Me - Paul Overstreet
8.Fathers 'Day - Lady saxda
Liiska Aabbayaashow Songs Day
Happy Maalinta Happy Aabbahay
Waxaad ku mahadsan tahay Aabe
Hab loogu talagalay Daddy
My Daddy Me ka caawiyaa
My Friend Gaarka ah
Inaan Aabbaha jeclahay
Waxa uu i jecel yahay iyo sidoo kale waan jeclaan
Doonayaa inaan la yaab Dad si lama filaan ah?